Muran ka taagan ganacsiga Internetka - BBC News Somali
Image caption Shirkadda Google ayaa kamid ah kuwa dibedbaxa sameynaya
Hay'adda nidaamisa isgaarsiinta Maraykanka ayaa horraantii sannadkan diidmo dul dhigtay in meesha laga saaro xukun dhacay wakhtigii Obama, kaasoo ka hortagaya in la hubiyo xogta iyo sidoo kale tillaabooyin ay dadka ololeeya u arkaan inay dhaawac ku yihiin Internetka.
Dadka ka hor jeeda dhexdhexaadnimada internetka waxay leeyihiin arrintan waxay dhuunta qabanaysaa wax soo saarka hal abuurka ku dhisan, waxayna niyad jabinaysaa in la maalgashado is gaarsiinta.
Shirkadaha cabashada samaynaya waxaa ka mid ah Google, Facebook, Amazon, Reddit, AirBnB, Twitter iyo Snapchat.
Dadka oloeeya waxay BBC u sheegeen in ilaa 80,000 oo website iyo adeegyada internetka isugu jira ay ka qayb qaadanayaan tallaabooyin isku xiran oo loogu tala galay in lagu soo jiito dareenka shacabka, kuwaasoo ku saabsan in laga laabto xeerarkan.
Cabashada noocan oo kale ah ayaa ah mid hore loo arkay waxtarkeeda. Tiro shirkado ah ayaa hawlahooda joojiyey ayagoo cabasho ka ahaa sharci la xiriira xatooyada lagu sameeyo waxyaabaha ay internetka ku soo bandhigaan. Waxay ku doodayeen intaasi ay khatar ku tahay xorriyatul-qowlka. Shaqo joojintooda waxay horseedday in dib loola laabto sharciga.
Laakin qolyaha iminka cabanaya waxay wajahayaan dagaal aad u kharaar oo ay ku qancinayaan jamhuuriyiinta gacanta ku haya hay'adda FCC iyo maamulahooda Ajit Pai.
Goor sii horraysay oo sannadkan ah ayey waaxdu ku tilmaantay xukunka Mr Obama mid khatar galinaya maalgashiga Internetka.
In la dhiirrigaliyo maalgashiga kaabayaasha ayaa ah doodda ugu adage e ay ku doodayaan qolyaha ka horjeeda internetka, iyadoo shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta ay ku doodayaan in google iyo facebook iyo kuwa la midka ah ee dunida ka jira aysan jiriba kareen haddii uusan jirin internet xawaarihiisu sarreeyo oo ay shirkado bixiyaan.
Mowqif la yaab leh waxaa qaatay shirkadda AT&T oo sheegtay in ay cabashada taageerayso, inkastoo ay markii hore aad u garab taagnayd kuwa ka hor jeeda dhexdhexaadnimada internetka.
Kooxaha ololaha wada ayaa waxoogaa yar oo xushmad ah siiyey AT&T ayagoo sheegay in shirkaddu ay muhimad siisay xogta oo shirkadaha shabakadaha leh u ogolaanaya inay lacag siiyaan AT&T si ay muhiimad u helaan, oo dadkuna ay si dhakhsiyo leh ugu xirmi karaan.